Hiiraan Online News About Somalia » Sheeko Cajiib ah: Aqooni Waa indho Qura ee Soomaaliyeey aan wax Ogaano inta aan….
Sheeko Cajiib ah: Aqooni Waa indho Qura ee Soomaaliyeey aan wax Ogaano inta aan….
‪Maalin sabti 2/9/2017 aroornimmaddii waxa aan safar dhulka ah dhinaca bari uga baxay magaaladda hargaysa.‬
‪Waxa uu ahaa safarkii iigu horeeyay, oo kaga baxay hargaysa. Maan dareemayn wax cabsi ah qalbigayguna waxa uu dareemayey farxad iyo rayn rayn.‬
‪Run ahaantii waxa uu ahaa safar qalbigeyga badalay, isla markaana i farxad galiyay. maan daalin intii aan safarka ahaa, sidoo kale ima qaban hurdo. jidku waxa uu ahaa mid aad u dheer una qurux badan. ‬
‪Hargeysa ilaa burco waxa u dhaxaysa masaafo dhan ilaa (300 km) hadana marna ma dareemin in aan safar ahay mararka qaar waxaan u maleynayey in aan riyonaayo, hadana waxa anaa arkaa in wax waliba dhab yihiin.‬
‪Markaan soo gaarnay buuraleydda caanka ah sheekh ee u u dhaxaysa berbera iyo burco dareenkeygu hal mar ayuu is badalay.‬
‪Maxaa yeelay shiikh iyo muuqaalkeedu waxa uu igu ahaa sheeko, laakiin hada indhahayga ayaan wax walba ku arkayey.‬
‪Run ahaantiii waa meel aad u qurux badan. waa buuro Alle sw u sameeeyey qaab cajaa’ib ah, waa dhul kala koreeya. wadadii aan soo maranay ayaa markaan buurta ku dagay iga hoos martay waxan malaysan waayey in aan joogo sheekh iyo malahayga tahay.‬
‪Muddo saacado ah markaan fiir fiiranayey quruxda sheekh iyo caajiibka aan ku arkayey halkaas, ayaan ka soo dhaqaaqnay anaga oo soo aadnay dhankaas iyo magaaladda burco ee gobolka Togdheer.‬
‪Run ahaantii hadafkeyga iyo u jeedkaygu waxa uu ahaa in aan mar kaliya soo arko oo aan indhaha ka soo qaado abwaankeenna weyn ee Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi) waxa aan imid oo aan soo gaadhay magaaladdii burco.‬
‪Waa magaalo qurux badan waxa i soo jiitay qaabka loo dhisay magaalada waxaa ku nool magaladaas dad aad u wacan. waa wada faraxsan qalbigoodu nadiif yahay.‬
‪Waxa aan u sheegay safarkayga u jeedkiisa, “in aan xamar uga soo boqolaay in aan abwaan Hadraawi soo booqdo. waxa ay noo soo dhaweyeen aniga iyo saaxiibadda i weheliyey ba’ si aad aanu uga mabsuudnay, si dad soomaliyeed isku soo dhaweyaan sidii ugu quruxda iyo qiimaha badnayd.‬
‪Waa ay malaysan waayeen in aan u soconay aniga labadayda Saaxiib ee Muuna Yuusuf iyo Sahra Qorane in aan mar un indhaha saarno abwaankeenna qaaliga ah. waxa markiiba nala geeyay si na loogu soo wareejiyo magaaladda oo aan dhinac kasta ka soo marnay soona daawanay quruxdeedda.‬
‪kadib ayaan waxaan sii guda galanay ula jeedkii ugu weynaa oo aan marka qaar u heestay in waajib na lagu leeyahay uu ahaa sida salaadda ay waajibka u tahay.‬
‪Waxa aan u soo dhaqaaqnay gurigii burco nagu qasbay in aaan imaano, guriga waxa uu ahaa guri barakeysan, guri qurxoon, waa guriga uu ku nool yahay abwaankeenna qaaliga ah ee Maxamed ibraahim warsaem (Hadraawi).‬
‪Markii aan soo gaarnay gurigii, ayaan waxaan arkay abwaanka oo banaanka gurigiisa kursi cad u yaallo, kuna fadhiya, waxa uu gacanta ku heestay kitaab qur’aan ah oo uu markaas aqrisanaayey. dhabtiii waan is badalay meel aan jogaaan garan waayey.‬
‪Farxad ayaan la qiirooday waxa aan dul imaanay abwaanka, waxa aan haddana malaysan waayey inuu isagii yahay hadana waa asagiii riyadiii waa ay dhamaatay. waxa aan salaamay abwaanka waliba waxa aan ku iri xamar ayaan ka imid waliba adigaan kuu imaanay aniga Sahra Muuna.‬
‪Waxa iigu farxad badneyd ayaa ah inuu laabtiisa i galiyay waliba in cabaar ah waxa uu nagu yiri “habloow anaga waad duqownay waxa wadanka aan uga tagay idinka iyo inta idin la midka ah waxa aan rabaa anigoo faraxsan in aan dhinto adinka ayaa ah ilmaheyga waan idin jeclahay.‬
‪Waxa jirtay hal eray uu ku celcelinaayey oo ahaa “all the way to Mogadishu to see me”‬
‪Waxa ay ii tahay farxad gooni ah ayuu dhahay in aad ii timaadaan oo aad i soo sharaftaan. waan soo marxabeeyay abwaanka aniga oo rumeysan la’ in uu laabta i geliyey oo si waalidnimo ah ii salaamay. “Allow kaa raali noqo caafimaad taam ah allow ku siii. ‬
‪Waxa cajiib ahayd habeenkii waxaa na loo kaxeeyay magaladda banaankeedda waxa aan la kulanay dhalinyaro badan oo reer Hargeysa iyo reer burco ba ah sheeko iyo is barasho waxa aan dib ugu soo laabanay wadaddii dheerayd ee soo aadaysay magaaladda Hargeysa.‬
#Qalinkii Fahma Gabax